Xildhibaano sheegay mushaarkooda shuruud in looga dhigay ka la... | Universal Somali TV
Xildhibaano sheegay mushaarkooda shuruud in looga dhigay ka laabashada Mooshinkii Shariif Xasan ay ka keeneen
Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Maamulka Koonfur Galbeed, ayaa waxa ay sheegeen mushaarkooda in shuruud looga dhigay ka laabashada Mooshinkii ay ka keeneen Madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Xildhibaanadan oo kulan ku yeeshay Magaalada Baydhabo, ayaa waxa ay sheegeen in lagu wargeliyay in la siinaayo Mushaarka, haddii ay ka laabtaan Mooshinka ay ka keeneen Madaxweynaha.
Xildhibaan Faysal Sheekh Cawad oo kamid ah mudanayaashaasi ayaa warbaahinta u sheegay in shaqsi ahaan isaga lacagtaasi loo soo diray, kadibna gaari lagu qaaday loona sheegay inuu ka laabto mooshinka, balse wuxuu tilmaamay markii uu arrintaasi diiday in dib looga celiyey lacagtii.
Dhanka kale, xildhibaannadan ayaa ugu baaqay dowladda dhexe iney soo farageliso arrintaan oo ay dib u eegto lacagaha ay siiso maamulka K/galbeed.
Kan-xigaTaliska Booliska oo beeniyay gaadiid ...
Kan-horeShacabka Somaliland oo maanta u daree...
39,206,437 unique visits